Samsung Galaxy S Wifi 5.0 (II) imtixaan | Androidsis
Ka dib markii a qaybta koowaad oo loogu talagalay jir ahaaneed ee terminaalka, waxaan ka hadli doonnaa ilbidhiqsigan ku saabsan qaybta software-ka. Dhamaan programas iyo Is dhexgalka in qalabkani na siinayo, iyada oo faa'iidada u leh, dabcan, Android.
Waxaan ku bilaabaynaa ka hadalka ku saabsan nidaamka qalliinka waxa uu keenayo. Ka kooban Android 2.2.2, laga bilaabo noocyadii ugu dambeeyay ee Froyo, oo leh firir 2.6.32.9. De cusbooneysiinta Gingerbread waxba lama sheegin waxaa qoray Samsung. Markaad iska dhigaysid sinjibiisha kaligaa, waxbana kama helin. Nasiib darrose, ma ahan aalad aad loo jecel yahay umana muuqato wax horumar ah oo loo samayn karo. Waad rujin kartaa qalabka laakiin wax kale ma jiraan. Waan hubaa in nooc ka mid ah CyanogenMod oo laga keenay Galaxy S (taleefan) oo loo keenayo East Galaxy S (MP4) aysan dhib noqon lahayn, laakiin ma jirto cid ka shaqeyneysa.
Sida for deegaanka garaafyada waa Taabasho ee Samsung oo keenaya Galaxy S iyo taas Waxay u shaqeysaa si aad u wanaagsan. Animations ku filan iyo suurto gal ah in lagu daro widget qaar ka mid ah. Waxeey heesataa dhexgalka shabakadaha bulshada si aad u waafajiso xiriiradaada Facebook ama Twitter oo aad ugu darto xiriiradaada. Waxay noqon kartaa xoogaa gaaban dalabyada widget-yada ah ee ay bixiso, haysan tusaale ahaan saacad kasta, oo miisaska sida LG ama HTCSense ay sameeyaan. Laakiin wax dhibaato ah kuma lahaan doontid raadinta 823498235 (tirada qiyaasta) ee Widget-yada leh saacadaha suuqa Android.
Ka kooban codsiyo u gaar ah ee nidaamka loogu talagalay Email ama Kalandar, marka lagu daro Google gapps oo leh barnaamij u dhigma oo loogu talagalay Gmail, Gtalk ... Waxaan sidoo kale haysannaa codsi ka xiiso badan maaree hawlaha iyo inaad awood u yeelatid inaad xidho codsi ku hadhay asalka adigoon ogeyn ama si fudud loo xanibay. Faylasha biraawsarka si aad u aragto feylashayada ku jira xusuusta gudaha ama microSD. Waxay kaloo leedahay a xafiiska bilaashka ah iyo a xusuus qor yar inaan waxyaabahayaga qorno. Waxay kaloo keentaa Video Qik wicitaanka fiidiyowga (oo leh buugiisa Qik) si aad u isticmaali karto kamaradda hore.
El media player waa sarraysaa In kasta oo, ay macquul tahay in qalab loo adeegsado ka ciyaarista waxyaabaha ku jira noocyo badan oo kala duwanaan ah, terminalkani wuxuu leeyahay tayo maqal oo aad u wanaagsan. Ciyaaryahanka laftiisa marka lagu daro is barbardhiga, waxay bixisaa qaar saamaynta codka in ka badan oo xiiso leh si kor loogu qaado muusikada aad ugu jeceshahay iyo inaad awood u yeelatid inaad kala hagaajiso dhammaan xulashooyinka sida aad ugu jeceshahay oo sidaasna waad ugu raaxeysan kartaa heesaha aad ugu jeceshahay mar kasta oo aad rabto tayo aad jeclaan doontid.
Ikhtiyaar kale oo xiiso leh ayaa ah 'Allshare ' ka yimid Samsung. Kuwa aan ogayn, waa codsi ka mid ah qalabka Samsung oo noo oggolaan doona la wadaag faylasha warbaahinta in aan ku hayno astaamaha astaamaha, isku darista midba midka kale ama kombiyuutarka adoo adeegsanaya shabakadda Wi-Fi ee gurigaaga, bilaa fiilooyin. Xilligan waxaan dhageysanayaa muusikada ku keydsan my Galaxy S Wifi iyada oo loo marayo dalabka PC-ga iyada oo aan loo baahneyn in loo wareejiyo muusikada darawalkeeda adag, iyo iyada oo aan la isku xirin fiilooyin kasta. Muusikada waxaad ka xakameyn kartaa taleefanka laftiisa, adoo dooranaya goorta aad u wareegeyso heesta, iyo waxa aad rabto in laguu ciyaaro. Waxay noqon laheyd wax lamid ah wadaagida faylalka shabakada inta udhaxeysa aaladaha, laakiin iyadoon loo baahneyn in la hagaajiyo goobaha.
Haddii intaas oo dhan, waxaan ku darnaa inaan ku hor jirno a Qalabka Android, Waxaan geli karnaa Suuqa oo kala soo bixi karnaa dhammaan codsiyada aan ku isticmaalno taleefannadeenna. Waxaan wajaheynaa a terminal sida android kasta oo kale, oo leh faa'iidooyinka ay tani bixiso, iyo adiga oo aan lacag siin shirkadda taleefankaaga bil kasta. Waxaa laga yaabaa haddii aad seegto booska microSIM oo aad ku haysan karto 3G banaanka guriga, maadaama aanan mar walba haysan Wi-Fi. Dabcan, tani waxay kordhin doontaa kharashka boosteejada mana sii ahaan doonto mid soo jiidasho leh indhaha iibsadayaasha.
Ugu dambeyntii, ka hadal 2500mAh baytariga. Way fulineysaa, iyo wax badan. Adoo tixgelinaya inaan haysanno shaashad 5-inji ah, waad arki kartaa wax kasta oo aad rabto oo waxaad dhageysan kartaa muusig badan. Waxay ku timid 6h fiidiyoo ah in Samsung ay ku dhawaaqday tiro badan. Haddii aad adiguna ciyaartid ciyaaro, waa inaad waqti fiican ku qaadataa inaad ku ciyaarto si aad bateriga u isticmaashid.
Ilaa hadda qaybtan labaad ee aan kaga hadlayno barnaamijyada softiweer. Waxaa jiri doona a qaybta saddexaad halkaas oo aan ka eegi doonno waxqabadka terminaalka waxaanan tijaabin doonnaa ciyaar u baahan xoog xoogaa garaaf ah, si aan u eegno haddii terminalku na siin karo awood iyo in kale, iyadoo lagu tirayo 'kaliya' oo leh processor 1GHz iyo xuddun.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Reviews » Samsung Galaxy S Wifi 5.0 (II) tijaabo
waxaan jeclahay samsung dijo
Fadlan la soco qeybta seddexaad, waan jeclahay, waa qurux badan tahay astaamo aad u wanaagsan, laakiin waxaan ka labalabeynayaa inaan iibsado tan ama ipod taabashada DILEMA,
Jawaab si aan u jeclaado Samsung
Waxaan haystaa ku dhowaad diyaar. Waxaan hayaa dhowr fiidiyow oo aan soo rarinayo.
Galabta guul darrooyin !!
Horaan u daabacay maalinteeda.
Waxaan arkaa inaadan dheg jalaq u siin 😛
iga raali noqo jaahilnimadayda, samsung galaxy s Model yp-g70 moodeel waa uun kumbuyuutar kumbuyuutar ama sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa taleefanka gacanta ?????
hello Waxaan hayaa galaxi S yp-G70 SN Waxaan u baahanahay inaan ogaado sida loogu soo dejiyo sawirada pc-ga
Ku jawaab Crismago87
Sawirka booska Fabian Del Pino dijo
Waan ka xumahay waxaan soo iibsaday Galaxy S wifi 5.0 ama ciyaariyahan, Su’aashaydu waxay tahay hadii ay suurta gal tahay in la cusbooneysiiyo aaladdan Android 3.1 HONEYCOMB ama 4.0 ICECREAM SANDWICH?
Waad mahadsan tihiin waxaanan rajaynayaa inaad i caawin kartaan!
Jawaab Fabian Del Pino
Ma jiraan noocyo rasmi ah oo ka sarreeya 2.3. Nasiib darrose Samsung way naga tagtay maaddaama astaamaha qalabku ay siinayaan ku filan inuu ku shaqeeyo 4.0 si habsami leh. (Haddii nooca xperia uu wado, ha socodsiinin ciyaartoygan warbaahinta!)
Ku jawaab chivaloco
Sideen uga furaa biin kaniiniga yp g70
galaxy-kani ma noqon karaa taleefanka gacanta?
Ku jawaab Nicolasricchary
haye, waxaan hayaa samsung galaxy yp g70 kiniin, waxaanan doonayay inaan ogaado inay jirto wado loo isticmaalo taleefan ahaan. haddayse tahay sidee loo sameeyaa?
Sideen u qaadan karaa shaashadda
Waad salaaman tahay waxaan haystaa galaxy s yp-g70 waxaan doonayay inaan ogaado haddii ay jirto qaab kasta oo loogu isticmaalo taleefanka gacanta?
su’aal kale: whatssappka waad ku soo dejisan kartaa kiniinkan? halkee ayaan kala soo bixi karaa? Waa maxay? caawi fadlan 🙂
Alonso Ibanez Becerra dijo
Maanta hadaan furo samsung galaxy s wifi 5.0 ma lahan wax ku xeeran oo burburaya ama sidee ku furaa
Jawaab Alonso Ibañez Becerra
sideen ku iibsan karaa galakan yp g70 sideen ku sameyn karaa waxaan jecelahay sheygan waxaan ku noolahay argentina mahadsanid magacaygu waa willy
Ku jawaab si aad u jilciso